I-Raw Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Abavelisi-Phcoker
I-Synephrine HCL powder yinto eyenzeka ngokwendalo yemichiza ye-alkaloid efumene izityalo kwaye ikhutshelwe ukusetyenziswa njengesongezelelo …… ..
Indawo yokubilisa 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (n)
Eyona idla ngokusetyenziswa njengeSynephrine hcl dosage malunga ne-100mg ngosuku. Oku kuthathwa njengomthamo owaneleyo wokufezekisa ukunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, isixa esicetyiswayo sokuba nabasebenzisi abanemiqathango kufuneka bangadluli kwi-200mg ngosuku. Nantoni na engentla kolu phawu ithathwa ngokuba iyityhefu kwaye iya kubeka umntu emngciphekweni wokufumana isihlenga seziphumo ebezingalindelekanga ezinokubangelwa kukusebenzisa okushukumisayo. Kuyacetyiswa ukuba uqale nge-10 ukuya kwi-20mg yokuqinisekisa ukuba iSynephrine hcl powder iyahambelana ngaphandle komzimba. Emva kokuthatha le dosi yokuqala, kuya kufuneka uthathe ixesha lokuvavanya impendulo yomzimba kwisongezelelo. Ukuba konke kulungile, idosi yesibini emalunga ne-20mg inokongezwa emva kweeyure ezimbini. Ngaphandle, elona xesha likhuselekileyo lokuthabatha lithatha iSynephrine hcl powder kube kanye kwiiyure ezimbini.
Ukusetyenziswa kweSynephrine kukwahamba kunye neziphumo ebezingalindelekanga njengalo naliphi na ichiza. Xa isibini sokutshatisa ukusetyenziswa kwe-synephrine hcl kunye ne-caffeine. iza neziphumo ebezingalindelekanga. Oku kulandelayo zezinye iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo: